Anders Borg oo siyaasada ka baxay | Somaliska
Wasiirkii dhaqaalaha Sweden Anders Borg oo ahaa maskaxdii ka dambeysay in Sweden ay ka badbaado dhibaatada dhaqaalaha ee ku habsatay wadamo badan ee Yurub ah ayaa ku dhawaaqay in uu iscasilay isla markaana ka baxay siyaasada guud ahaanteeda.
Anders Borg oo shir jaraa’id qabtay maanta ayaa sheegay in uu isaga baxayo siyaasada, isagoo u mahad celiyay raysal wasaare Fredrik Reinfeldt oo isna maanta gudbiyay iscasilaadiisa. Anders Borg oo la filayay in uu noqdo hogaanka cusub ee xisbiga Moderaterna (M) ayaa cadeeyay in uusan taasi doonayn.
Waxa uu sheegay in uu siyaasada ka baxay, oo uu shaqo kale raadsan doono.
Xisbiga Moderaterna ayaa xalay si weyn looga guuleystay doorashadii, iyagoo si weyn aad hoos ugu dhacay, xisbiga Socialdemokraterna (S) ayaa la wareegaya hogaanka wadanka. Xisbiga cunsuriga ah ee SD ayaa si weyn iyaguna guul uga gaaray doorashada.
Xasuusin: Ha hilmaamin in aad saacada badasho!